လူမှုမြှင့်တင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် Digital Asset Management ကိုအသုံးပြုခြင်း။ Martech Zone
လူမှုမြှင့်တင်ရေးကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေရန် Digital Asset Management ကိုအသုံးပြုခြင်း
ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 30, 2014 ကြာသပတေးနေ့, ဇန်နဝါရီလ 30, 2014 Douglas Karr
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိသန်းနှင့်ချီသောဖောက်သည်များရှိသောကျွန်ုပ်တို့၌ဖောက်သည်နှစ် ဦး ရှိသည်။ လူမှုကွန်ယက်မဟာဗျူဟာကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ တုန့်ပြန်ခြင်းနှင့်ထိုအရွယ်အစားကိုတုံ့ပြန်ရန်ဖိအားပေးခြင်းသည်သေးငယ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ပါ။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှမသိသောအချက်များမှာအသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာများကိုရှာဖွေရန်၊ အတည်ပြုရန်နှင့်ထုတ်ဝေရန်စွမ်းရည်ကိုရိုးရှင်းစေရန်သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနှင့်အလုပ်အသွားအလာကိရိယာများဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူမှထုတ်လုပ်သောအကြောင်းအရာ (UGC) သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်တတိယပါတီမှကုမ္ပဏီအားထောက်ခံသည့်အခမဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ သင်ရှာဖွေရန်မလိုပါ - ၎င်းသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်ရှိပြီးဖြစ်သည်။
BEAM ဆက်သွယ်မှုMINI USA ကိုယ်စားလူမှုကွန်ရက်များဖြစ်သော Facebook၊ Twitter နှင့် Instagram တို့၊ cloud connectors (IFTT.com ကဲ့သို့)၊ work sharing လုပ်ငန်းသုံးကိရိယာများ၊ ဖိုင်ဝေမျှရေးကိရိယာများ (Dropbox ကဲ့သို့) နှင့်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုပလက်ဖောင်းတို့ကိုပေါင်းစပ်ပြီး ကျယ်ပြန့် -powered ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစာကြည့်တိုက်.
ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုအမှု # 1
MINI ဖောက်သည်များသည် MINI နှင့်ပုံများဖန်တီးနေကြသည်။ ဤပုံများသည်လူမှုရေးကွန်ယက်မျိုးစုံတွင်တည်ရှိပြီးအသုံးပြုရန်အတွက်ဗဟိုနှင့်ဗဟိုဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်။ Social Media hashtags များကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် BEAM သည် IFTT.com နှင့် Dropbox နှင့် Widen ပေါင်းစည်းခြင်းအားဖြင့်ဖောက်သည်များမှအကြောင်းအရာများကိုပြသနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။
BEAM သည် Widen DAM ကိုအကောင်အထည်ဖော်ပြီးလုပ်ငန်းအသွားအလာကိုအသုံးပြုခဲ့သည် Widen ရဲ့ Dropbox ပေါင်းစည်းမှု, Instagram, Facebook နှင့် Twitter မှအကြောင်းအရာများကိုရယူရန်နှင့်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအမျိုးမျိုးတွင် MINI ပါဝင်မှုကိုအလွယ်တကူတပ်ဆင်နိုင်သည်။
ကျယ်ပြန့်အသုံးပြုမှုအမှု # 2
ပြိုင်ပွဲအတွက်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြရန် MINI ပိုင်ရှင်များအတွက်နေရာလိုအပ်သည်။ ဒီဗီဒီယိုတွေကို ၀ က်ဘ်ဆိုက်မှာမပြခင် MINI အဖွဲ့ကပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုတယ်။ ပြိုင်ပွဲများအတွက်အကြောင်းအရာများကို BEAM မှစုစည်းထားသည် MINIUSA.com နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်၎င်း၏အများပြည်သူတင်သွင်းခဲ့တဲ့ပြခန်းအပေါ်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအရာများကိုတင်ပြသည်။
BEAM ကိုအသုံးပြုခဲ့သည် API ကိုတိုးချဲ့ပါ ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာများကို၎င်း၏ Widen DAM ဖြေရှင်းချက်သို့တင်ရန်ခွင့်ပြုရန် MINIUSA.com။ ဗွီဒီယိုအကြောင်းအရာများကို Widen DAM သို့တိုက်ရိုက်တင်ပြပြီး၎င်းကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ပြီးနောက် Widen ၏ဗွီဒီယို embed ကုဒ်များကို MINIUSA.com အများပြည်သူပြခန်းတွင်အသုံးပြုသည်။
ထုတ်ဖော်: ကျွန်ုပ်တို့သည် Widen နှင့်အတူသတင်းအချက်အလက်နှင့်အီးမေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းဗျူဟာများကိုယခင်ကလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုစီမံရန်လိုအပ်သည့်မည်သည့်အေဂျင်စီ (သို့) စီးပွားရေးကုမ္ပဏီအတွက်မဆိုကောင်းမွန်သောထုတ်ကုန်များရှိသောသူတို့သည်လူကောင်းများဖြစ်သည်။ ဤအသုံးပြုမှုကိစ္စများအပြင်သူတို့၏အချက်အလက်ဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုကြည့်ပါ။ ပိုမိုနားလည်ရန်ဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်စီးပွားရေးကိစ္စ.
Tags: apiရောင်ခြည်ရောင်ပြန်ဟပ်ရောင်ခြည်ရေကာတာဆည် apiဒီဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုdropboxiftttinstagramစျေးကွက်ရှာဖွေရေးဗွီဒီယိုများmini ကိုချစ်သူugcအသုံးပြုသူထုတ်ပေးအကြောင်းအရာချဲ့အကျယ်ချဲ့